Udliwanondlebe noXabier Gutiérrez, umyili wohlobo lweGastronomic Noir | Uncwadi lwangoku
Udliwanondlebe noXabier Gutiérrez, umyili wohlobo lweGastronomic Noir
UAna Lena Rivera Muñiz | | Udliwano-ndlebe
UXabier Gutiérrez: Umbhali we-tetralogy El Aroma del Crimen.
Siyavuya ukuba namhlanje kwibhlog yethu kunye Xabier Gutierrez, ESan Sebastián, 1960, umyili we Noir yesisu, apho uhlobo olumnyama olwenzeka phakathi kwezitovu kunye nezitya zokutyikitya. UXabier unjalo omnye wabapheki abadumileyo kwilizwe lethu kunye Umbhali we-tetralogy Los Aromas del Crimen, Ekhankanya uSekela-Khomishinala we-Ertzaintza, uVicente Parra
Ngaphambi kokuba afe, wasitya isidlo sakhe sokugqibela. Kodwa ngeli xesha kukho umahluko omncinci kuluhlu olude lwezitya awayebhale ngazo kwiphephandaba awayesebenza kulo: oku kwakulungiselelwe nguye ngoncedo lwababini abangamaziyo ababemhlasela. Kwaye kwakungcamla igazi kunye nevumba lamalahle apho babose khona inyama yengulube awayegqibile ukuyitya kwiiyure ezimbini ezidlulileyo. Kananjalo nasekufeni. (Incasa ebalulekileyo, uXabier Gutiérrez)
Iindaba Zoncwadi: Iincwadi ezintathu, uhlobo olutsha kunye neertzaintza njengomntu ophambili. Unika abo bathandayo ulonwabo lokungcamla izidlo ezingacingekiyo eziqhuba inkalakahla, emva koko bagqibe kwelokuba baxhokonxe imiphefumlo yabo ngobubi nokuphelelwa lithemba okufihlwe lulwaphulo-mthetho. Kwenzeka njani ukuba umpheki okrelekrele, ophumelele amabhaso nowaziwayo njengoXabier Gutiérrez eze kwincwadi yolwaphulo-mthetho?
Ndafika kwiminyaka emininzi eyadlulayo. Ngethuba lokuqala ndafumanisa xa ndandineminyaka engama-XNUMX ubudala. Kuqala ndiyenze ngencwadi endingasokuze ndiyilibale. Ixesha lokuthi cwaka. (Luis Martin Santos) Kwaye kukuqina kwam ndicinge ukuba ndingayenza loo nto. Okanye ubuncinci into efanayo. Ubudenge ndicinga ukuba loo ngcinga ibizwa, hahaha. Ubomi bam bebubhinqiwe ngamagama. Ndivela kwiileta ngokubonakalayo. Ndiyathanda ukudlala nabo. Benze bathethe oko bakufihlileyo. Ndinentloni kwaye ngamanye amaxesha ndisebenzisa amagama njengekhaka ukuzikhusela. Banesidima sokuthula okucacileyo. Into ethethwa ngaphandle kokuthetha igama inobuso obusondeleyo. Kwaye phantse ngonaphakade. Akukho moya uya kubathatha.
AL: Ababhali baxuba kunye ne-centrifuge iinkumbulo zabo kunye namabali abawevileyo ukwenza abalinganiswa kunye neemeko. Ukuphefumlelwa kwakho kuvela ekhitshini, kwindalo yakho yendalo, leyo uyijongileyo, apho uziva ukhululekile. Kwaye kwalapho, ulwaphulo-mthetho luyavela. Ezincwadini zakho, iwayini, umgxeki wokutya, kunye nabantu abohlukeneyo abanxulumene nehlabathi le-gastronomy sele beswelekile.Ngaba iimbono zivela kumaxesha okwenyani, kwiziganeko ezenzeka ekhitshini, okanye ngaba kukucinga okuqinisekileyo ukuba usete imeko kwindalo esingqongileyo? wazi ngcono?
XG: Iinoveli zam zonke ziyintsomi, zixutywe nenyani. Umdlalo ufumanisa apho ndiwunonge khona. Kuyacaca ukuba ngokwazi okusingqongileyo kakuhle, ngamanye amaxesha uwela kwisilingo sokuvelisa okusingqongileyo okanye abalinganiswa abasondeleyo, kodwa kuyacaca ukuba akunjalo. Ndenza iimeko ekucingeni kwam. Kodwa kuyinyani ukuba ukucinga kwakho, okuyinxalenye yokuveliswa kwenkqubo yokuyila, sisiphumo sokujonga kwakho kwaye kunokukukhohlisa ngokukhumbula izinto okanye iimeko okhe waphila kodwa awukhumbuli. Ngumdlalo apho uhlala uzivumela ukuba uqhutywe ungazi.
AL: Ivumba lolwaphulo-mthetho, Isixa soloyiko y Incasa ebalulekileyo, le yokugqibela yapapashwa ngo-2017. Silahlekile umsebenzi wokugqibela we-tetralogy kwaye abafundi bakho bayazibuza ukuba ngaba siza kuhlala ukuba amanye amacala e-Vicente Parra, ngaba umsebenzi we-ertzaintza yethu oyintandokazi uya kuphela ngecala lakhe elilandelayo?
XG: Ngokomgaqo yi-tetralogy kwaye iphela ngenxalenye yesine (iBlack Rose Perfume) esithemba ukuba izakuphuma kungekudala. Kule yokugqibela, izinto ezifihliweyo zifunyenwe ukusuka kufakelo lokuqala. Oku kulindeleke ukuba kube njalo, nangona sele uyazi ukuba zone zinoveli zokuziqukumbela. Ukuqhubeka nepolisa elinye, andiyikhupheli ngaphandle, ndenze i-prequel esele ndiyizobile kodwa enemigca emithathu. Andazi. Ngoku ndizifumana ndigqibezela inoveli entsha. Owokuqala ngaphandle kwe-subcommissary ye-ertzaintza Vicente. Ndonwabile kwaye ndicinga nje ngokukwazi ukuwugqiba. Kukho amashumi amabini okanye amashumi amathathu amaphepha ashiyekileyo.
AL: UVicente Parra, u-ertzaitza, kwiminyaka yakhe yamashumi amahlanu, uthanda iipuzzle, utshatile kwaye utata wosapho, kunye nonyana ofunda ukupheka, okrelekrele, onomdla kwaye onentliziyo enkulu. IVicente ayisiyonto intle, nangona esitya ekhaya njengendawo yokutyela etofotofo. Yintoni uXabier ayinike uVicente noVicente Xabier?
XG: Umbuzo omhle lowo. Ndicinga izinto ezininzi. Sikhule kunye. Ndimfundise ukutya, kucacile. Ukubonakalisa imvakalelo emnandi yokuba i-gastronomy inxibelelene ngqo nenkcubeko. Kuba ukuba uyalahla uyolo lokutya, urhoxisa isiqingatha sezona zinto zilungileyo umntu anokuzonwabela kwinto enye. INDLELA YOKUBONISA UKUHLEKA.
Kodwa undifundisile ukuba nocwangco kancinci, ndicingisise ngakumbi. Mhlawumbi i-visceral encinci. Nje kancinci. Ndisayithanda kwaye ndiyayithiya into yokuba nesibindi.
Kwelinye icala, mna noVicente sineenkani ngokulinganayo kwaye siyabathanda abantu basetyhini bethu, ndiyacinga, ngamandla afanayo.
Kodwa uVicente undinike okuninzi kunam. Undibonisile ukuba phantse rhoqo ukuba uyafuna, unga. Iresiphi ethi amaxesha amaninzi, hayi ngelishwa, iyasebenza. Idosi elungileyo yomsebenzi kunye nokukholelwa kuwe. Bebonke bahambisa iintaba.
Ngamanye amaxesha ndikhe ndayixela. Ndiyakwazi ukwenza i-shit, kulungile, kulungile, kodwa yeyam kwaye NDIYAKHOLELWA kuyo. Kwaye ndiyababulala.
KuVicente nosapho lwakhe (okubaluleke njengecebo lokubulala) ndinetyala ebomini bam elindenze ndafumana izinto ezintsha. Ndiye ndahleka nabo, ndikhale kakhulu, amaqhushumbisi andinike wona. Ngamnye wabo uyinxalenye yesamente. Ukusuka kumbono osondeleyo njengobomi uqobo. Emva kwayo yonke loo nto, yenye enye, eyenziwe ngephepha, endibenzele yona. Ndiyabulela kakhulu kuye ngokundibonisa bona.
Uyisemkhulu ndinetyala ngobuntu bakhe, kunyana wakhe wamazibulo ukuqhubana nentombi yakhe. Andazi, ndingakuxelela ngayo nganye nganye.
Ngenye imini ndiza kummemela kwisidlo sangokuhlwa eArzak, .. hahahaha, ndiyamtyala.
AL: UMlawuli weSebe elitsha leArzak Restaurant eSan Sebastián, umququzeleli weendaba ezahlukeneyo, umcebisi kwiinkampani zokwamkela iindwendwe, unjingalwazi kumphathi wolawulo lokutyela, iincwadi zokupheka ezipapashiweyo kunye nokuphumelela amabhaso kunye nombhali wobuxoki. Livela phi ixesha lezinto zonke?
XG: Usuku luneeyure ezingama-24 kwaye ngekhe uthelekise inani lezinto ezinokwenziwa ngexesha lemizuzu eyi-1440 abanayo.
Uya kuba nexesha lokuphumla xa usweleka, .. hahaha. Sukuyithatha ngexabiso lobuso. Hayi ngokungathí sina, ihamba indlela ende. Ndibhala kusasa iiyure ezimbalwa. Kunzima kum ukubhala ngakumbi, ukwenza. Emva kwexesha, emva kwemini, ndiyalungisa.
UXabier nguMlawuli we-Innovation ka-Arzak.
AL: Andizange ndicele umbhali ukuba akhethe phakathi kweenoveli zakhe, kodwa ndicela ukukwazi njengomfundi. Kwimeko yakho, ukuthanda ukwazi kukhulu kunangaphambili: Ngaba iincwadi ezithandwa nguXabier ziya kuba ziincwadi zokupheka, inoveli yokutya, mhlawumbi inoveli yolwaphulo mthetho…? Yiyiphi le ncwadi oyikhumbula ngothando olukhethekileyo, ekuthuthuzelayo xa uyibona eshelufini lakho? Nawuphi na umbhali onomdla kuye, uhlobo oluthengayo kuphela okupapashiweyo?
XG: Baxube konke. Ndiyayithanda imfihlakalo kunye nokuthandabuza. Ziyintloko kwaye kwinoveli zam ndizama ukuyidlulisa. Ndiyazithanda ezakudala kodwa nezethu. Lorenzo Silva, Dolores Redondo okanye uCarlos Bassas. Kananjalo iiNordics nangona ngamanye amaxesha ndizifumana zibanda.
Enye incwadi andiyi kuyilibala yile Exorcist kaWilliam Peter Blatty.
Ndihlala ndibalekela kwivenkile yeencwadi ukuba eyokugqibela evela eKing ifikile.
Omnye umthombo wam wokuphefumlela ngumboniso bhanyabhanya. Ndiyasela kuye kwaye ngamanye amaxesha bayandigxeka besithi iinoveli zam zifana nezikripthi zeemovie. Iphuma inje.
AL: Ngawaphi amaxesha okhethekileyo obuchwephesha? Ezo uya kuzixelela abazukulwana bakho.
XG: Ndiyathemba ukuxelela abazukulwana bam ukuba banotatomkhulu wabo owonwabileyo esenza into ayifunayo. Ngubani owayethanda abantu abasondeleyo. Wayenyanisekile kwimigaqo yakhe. Ukuba ndiphumelele amabhaso athile. Kodwa,…. Kuya kufuneka ndikuxelele ukuba ndiphazamile amaxesha aliwaka kwaye ndiza kunika yonke into endinayo ukuyilungisa. Kodwa konke oko kuyinxalenye yomdlalo.
Kwinqanaba lobungcali ndiza kukuxelela ukuba ukubhala kwakuyinxalenye yobomi bam.
AL: Ngala maxesha apho itekhnoloji ihlala ihleli ebomini bethu, ayinakuphepheka ngenxa yenethiwekhi yoluntu, into eyahlula ababhali phakathi kwabo bayalayo njengesixhobo sobuchule kunye nabo bayithandayo. Phantse abalandeli be-6.000 kwi-Twitter, i-2500 kwi-Facebook, phantse i-3000 kwi-Instagram, eneprofayile apho, ngokwenyani kwisitayile sakho, uxuba i-gastronomy kunye noncwadi. Zizisa ntoni iinethiwekhi zentlalo? Ngaba bayazodlula iingxaki?
XG: Yonke into inezibonelelo kunye nezinto ezingalunganga. Kungumcimbi wokubaxabisa kwaye le yokugqibela ayigubungeli eyangaphambili.
Kucacile ukuba iinethiwekhi zentlalo zinenxalenye elungileyo. Bavule indawo eninzi ukuze abantu bazi iincwadi zam. Ukukhupha izinto ezizezomntu kubi kancinci, nangona ngamanye amaxesha ndenza njalo.
AL: Ngaba kulula ukufumana imali ngokubhala okanye ngokupheka?
XG: Ukwenza izinto kakuhle kunzima ngandlela thile. Ukuba ufuna ukuba lilungu lokuqala emhlabeni, kuyakubiza nantoni na oyenzayo.
AL: Incwadi yedijithali okanye iphepha?
XG: Iphepha, livakala ngakumbi.
AL: Ngaba ubugebenga boncwadi buyakukhathaza?
XG: Ewe kufuneka abantu bayiqonde. Ukuba umsebenzi wethu uhloniphekile njengoko benza. Ndicinga ukuba siqhuba kakuhle kodwa kusekude ukuba sihambe.
AL: Ukuvala, njengesiqhelo, ndiza kukubuza owona mbuzo usondeleyo ungawubuza umbhali: kutheni ubhala?
Enkosi uXabier Gutiérrez, ndikunqwenelela impumelelo emininzi kuwo onke amacandelo obuchwephesha kunye nawobuqu, ukuba i-streak ingayeki kwaye uqhubeke usothusa ngesitya ngasinye esitsha kunye nenoveli nganye entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » Udliwanondlebe noXabier Gutiérrez, umyili wohlobo lweGastronomic Noir
UCamilo José Cela. Usapho lukaPascual Duarte kwizivakalisi ezili-12
Uncwadi, ukugqwetha kunye nokuchaneka kwezopolitiko.